I-SOICARE G78 280ml yeglasi bamboo / isinyithi esipholileyo ukukhanya okufudumeleyo okucwangcisiweyo kwe-oyile ebaluleke kakhulu, i-China SOICARE G78 280ml yeglasi bamboo / isinyithi epholileyo inkungu efudumeleyo ukukhanya ukukhanya i-ultrasonic kubalulekile i-oyile diffuser Abavelisi, abaXhasi, iFektri -Sunpai Industries Limited
I-SOICARE G78 280ml yeglasi bamboo / isinyithi epholileyo inkungu efudumeleyo ukukhanya ukukhanya cuke oyile diffuser
Ulawulo lweenqanawa ezijikelezayo -Ungacwangcisa inkungu, isibali-xesha kunye nokukhanya ngeqhina elinye. Kulula kakhulu ukusebenza.
Izinto zendalo Isiseko soqalo, isiciko seglasi. Ukunika imveliso ekhuselekileyo. Kwaye ndikunike imvakalelo yokunethezeka.
Ifom kunye nokuSebenza: Uyilo lwala maxesha nolulula ukuthelekisa ukuhonjiswa kwegumbi lakho; Umsebenzi we-5-in-1: aromatherapy diffuser, humidifier, air purifier, ionizer, kunye nombala we-LED oguqula ukukhanya ebusuku.
Umxholo kaMax: Iphunga elimnandi eligcina i-300ml yamanzi kwaye liqhuba iiyure ngaphandle kokufuna ukuzaliswa kwakhona Ngomthamo omkhulu, ivelisa inkungu enamandla kunye nevumba elimnandi. Inkungu ibonakala ngakumbi kuseto oluphezulu olulungele igumbi elikhulu.
Itekhnoloji ye-Ultrasonic ePhambili: Isithambisi sevumba sisebenzisa amaza e-elektroniki ukwenza ukungcangcazela kumaza esihlandlo esi-2.4 sezigidi ngomzuzwana siphula amanzi kunye neeoyile eziyimfuneko zibe ngamasuntswana amahle kakhulu ngaphandle kokusebenzisa ubushushu.
Kulula ukuCoca: Ngokungafaniyo nezinye izinto ezivumba kamnandi ezineziciko ekunzima ukuziqonda kwaye zivuleke, le inokuphakanyiswa ngokulula ukuze iphinde izalise kwaye icoceke.
Uqalo + Iglasi / IAluminiyam + Iglasi
Ulawulo lweqhina lokujikeleza
Ixesha elihlala lihleli
Iyaqhubeka okanye iphakathi
Ioyile kunye naManzi
*148 * 125mm
*190 * 160mm